ဤရွေ့ကား LG X4 Plus ၏စစ်ရေးလက်မှတ်နှင့်အတူမိုဘိုင်း၏သတ်မှတ်ချက်များ | | Androidsis
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ LG ဟာသူ့ဟာသူကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူလို့မသတ်မှတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ ဒီလမ်းကြောင်းဆီကိုအနည်းငယ်မှီခိုဖို့အာရှကုမ္ပဏီကမကြာသေးမီက LG X4 Plus ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ X4 + သည်အလယ်အလတ်တန်းစား Android ဖုန်းတပ်ဆင်မှုနှင့်စစ်ရေးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် MIL-STD 810G ပါရှိသည်။
ထို့နောက် Androidsis မှဤမိုဘိုင်းလ်တွင်ထည့်သွင်းထားသောအင်္ဂါရပ်များကိုတင်ပြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
LG G7 နှင့်ပတ်သက်ပြီးကောလဟာလများစွာထွက်ပေါ်နေသည့်အချိန်တွင်ကုမ္ပဏီသည်ယခုနှစ်တွင်ဈေးကွက်အတွင်းပြန်လည်သက်ဝင်လာမည့်နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာရုံစိုက်ရုံသာမကဘဲ၊ X4 Plus နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောပရိသတ်များနှင့် Android အသုံးပြုသူများအတွက်၎င်း၏ repertoire ကိုချဲ့ထွင်ရန်အာရုံစူးစိုက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်.
1 LG X4 Plus သတ်မှတ်ချက်များ
LG X4 Plus သတ်မှတ်ချက်များ
ဒီပစ္စည်းမှာ 5.3: 16 aspect ratio နဲ့ ၅.၃ လက်မ HD IPS LCD မျက်နှာပြင်ပါရှိပါတယ်။ ၎င်းတွင် Qualcomm Snapdragon 425 ပရိုဆက်ဆာနှင့် 2GB RAM ပါဝင်သည်။ Internal memory 32GB ခန့်ပါ ၀ င်ပြီး 2ab အထိအထိ microSD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။
ကင်မရာတွေမှာတော့ ကျောဘက်မှာ ၇၃ ဒီဂရီအကျယ်ထောင့်မှန်ဘီလူးပါ ၀ င်တဲ့နောက်ကျောမှာ 13MP sensor ပါရှိပါတယ်LED Flash ရှိသည့်အပြင်။ ပြီးတော့ရှေ့ဘက်မှာ ၁၀၀ ဒီဂရီအကျယ်ထောင့်မှန်ဘီလူးပါတဲ့အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုရှိတယ်။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, device ကို အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနမှပေးသော MIL-STD 810G စစ်ရေးလက်မှတ်နှင့်အတူပါရှိသည် ၎င်းသည်ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများ၊ ပြောက်များနှင့်ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အဆိုအရ LG, "X4 Plus သည်အမျိုးအစားခြောက်မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။ ၎င်းမှာတုန်ခါမှု၊ တုန်ခါမှု၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ အပူစျေးနှင့်စိုထိုင်းခြင်း".
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူ့မှာဘက်ထရီက 3.000mAh ရှိပြီး Android 7.0 Nougat မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ် စက်ရုံလည်ပတ်မှုစနစ်အဖြစ်။ အနောက်ဘက်တွင်လက်ဗွေဖတ်စနစ်၊ သတ္တုဒီဇိုင်းနှင့် LG Pay ငွေပေးချေစနစ်တို့အပြင်
ဒီစမတ်ဖုန်းကိုတောင်ကိုရီးယားမှာယခုလအကုန်တွင် ၀ ယ်ယူသူ ၃၀၀,၀၀၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်, နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှခုန်ကျော်နိုင်မည်လား၊ ဥရောပတစ်ခွင်သို့ပင်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်သည်ကိုမူမသိရသေးပါသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဥရောပရှိအချို့နိုင်ငံများသို့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဤရွေ့ကား LG X4 Plus ၏စစ်ရေးလက်မှတ်နှင့်အတူမိုဘိုင်း၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်
Android Wear 2.8 ကိုဤနေရာတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်